queen matarasị igbe spring set na N'ogbe Ahịa | Rayson
Rayson na Rayson Industrial Mpaghara, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Mpaghara, Guangdong, China. Main ngwaahịa Professional nkwalite ọma price kpara akwa innerspring na igbe Nsukka. nkwalite ọma price kpara akwa innerspring na igbe The àgwà akara nke Rayson a nditịm rụrụ na onye ọ bụla nzọụkwụ nke mmepụta usoro, karịsịa nhọrọ nke elastomer ihe. A sara mbara arụmọrụ ule Rayson e duziri. Ha na-na-emegide nje ule, abrasion eguzogide ule, mmiri-wicking, rigidity, na ike ule. nkwalite ọma price kpara akwa innerspring na igbe The ngwaahịa atụmatụ ume dị ukwuu. Mere nke ukwuu sturdy ihe na mmiri, ọ pụrụ iguzosi ike ike ihu igwe, ihe ịtụnanya, vibrations, na abrasion.
Na Rayson, technology mma na ọhụrụ na-anyị isi uru. Ebe ọ bụ na ike, anyị na a na-elekwasị anya na-emepe emepe ọhụrụ ngwaahịa, rụọ ngwaahịa mma, na ije ozi ahịa. queen matarasị igbe spring set Ọ bụrụ na i nwere mmasị na anyị ọhụrụ ngwaahịa queen matarasị igbe spring set na ndị ọzọ, na-anabatanụ gị kọntaktị us.Rayson queen matarasị igbe spring set na-ahaziri site n'ịkpa ọtụtụ iberibe nke elu na elu na-oru oma na emeputa ígwè ọrụ. Igwe ndị a na-agụnye ụkpụrụ imewe kọmputa, ịcha igwe, dyeing igwe, ígwè ịkwa ákwà, na arụmọrụ anwale ígwè ọrụ.
Olee otú itopusi a afụkọta matarasị?
1.Place katọn jidesie a ewepụghị elu gị ime, jiri nlezianya na sere matarasị si na ebe jidesie gị bed. 2.Carefully bee elu bag na mkpa na-eme ka n'aka na-adịghị bee plastic ọjọọ n'ime ma ọ bụ na-enwe, adịghị kpọpụ a mma. 3.Roll si agụụ-akàrà, matarasị jidesie gị bed 4.Carefully bee plastic akpa tinyere nche dị ka matraasi ntabi-amalite decompress, Wepu plastic akpa. 5.Allow 24 awa maka ọhụrụ gị matarasị ka n'ụzọ zuru ezu na-agbasa.